Epistilin'i Paoly - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Taratasin'i Paoly)
Epistilin' i Paoly na Epistola nosoratan' i Paoly na Taratasy nosoratan' i Paoly no ilazana ireo epistily (na epistola) telo ambin' ny folo ao amin' ny Baiboly, ao amin' ny Testamenta Vaovao, izay lazaina fa nosoratan' i Paoly. Misy amin' izy ireo ny nosoratana ho ana fiangonana, misy kosa ny nosoratana ho an' olona manokana dia ireo atao hoe Epistily pastôraly. Ireo epistily kanônika tsy nosoratan' i Paoly dia atao hoe Epistily katôlika.
Manoratra ireo taratasiny i Paoly, nataon'i Valentin de Boulogne, taona 1618-1620.
1 Lisitry ny epistily nosotan' i Paoly
1.1 Epistily nosoratana ho ana fiangonana voatondro
1.2 Epistily nosoratana ho an' olona manokana
2 Fanasokajiana araka ny lohahevitra
2.1 Epistily eskatôlôjika
2.2 Epistily ho an' ny fiainan' ny fiangonana
2.3 Epistily pastôraly
3 Fanasokajiana ara-potoana
3.1 Epistilin' ny fifatorana
4 Ireo epistilin' ny Paoly very
Lisitry ny epistily nosotan' i PaolyHanova
Epistily nosoratana ho ana fiangonana voatondroHanova
Ireto avy ireo epistily nosoratana ho ana fiangonana: ny Epistily ho an' ny Rômana, ny Epistily voalohany ho an' ny Kôrintiana, ny Epistily faharoa ho an' ny Kôrintiana, ny Epistily ho an' ny Galatiana, ny Epistily ho an' ny Efesiana, ny Epistily ho an' ny Filipiana, ny Epistily ho an' ny Kôlôsiana, ny Epistily voalohany ho an' ny Tesalôniana (na Tesalônisiana) ary ny Epistily faharoa ho an' ny Tesalôniana (na Tesalônisiana). Manalasala ny mpikaroka maro ny maha an' i Paoly ny fanoratana ny Epistily ho an' ny Hebreo (na Hebrio).
Epistily nosoratana ho an' olona manokanaHanova
Telo ireo epistilin' i Paoly nosoratana ho an' olona manokana hikarakara sy hitarika ny fiangonana izay atao hoe Epistily pastoraly: ny Epistily voalohany ho an' i Timoty (na Timôte) sy ny Epistily faharoa ho an' i Timoty (na Timôte) ary ny Epistily ho an' i Titosy (na Tito). Amin' ny mpandinika Baiboly sasany ny Epistily ho an' i Filemôna dia anisan' ny Epistily pastôraly fa amin' ny hafa kosa dia tsy izany.
Fanasokajiana araka ny lohahevitraHanova
Ny fanasokajiana atao eto dia mifototra amin' ny fotokevi-dehibe iompanan' ny epistily tsirairay, ka efatra ny sokajy azo amin' izany nefa misy boky hita amin' ny sokajy ara-dohahevitra roa.
Maneho ny fanantenana kristiana sy ny fiandrasana ny fiverenan' i Kristy izay nampiavaka ireo ny Fiangonana kristiana voalohany ireo epistily ireo.
Epistily voalohany ho an' ny Tesalôniana
Epistily faharoa ho an' ny Tesalôniana
Epistily ho an' ny fiainan' ny fiangonanaHanova
Miresaka ny amin' ny famonjena sy ny fiainan' ny Fiangonana ireto taratasin' i Paoly ireto.
Epistily ho an' ny Rômana
Epistily faharoa ho an' ny Kôrintiana
Epistily ho an' ny Galatiana
Epistily ho an' ny Filipiana
Ny epistily pastôraly dia iresahan' i Paoly ny amin' ny fandaminana ny fiangonana. Izy ireo no atao hoe vavolombelon' ny fifandimbiasana apôstôlika izay nipoiran' ny fisian' ny eveka, izay heverin' ny fiangonana katôlika sy ôrtôdôksa ho mpandimby ny asan' ireo apôstôly. Misy ny manohitra ny maha soratr' i Paoly ny Epistily roa ho an' i Titosy.
Epistily voalohany ho an' i Timoty
Epistily faharoa ho an' i Timoty
Epistily ho an' i Titosy.
Epistilin' ny fifatoranaHanova
Ireo epistily ireo dia nosoratan' i Paoly tany am-pigadrana tao Kaisarea (na Kaisaria) sy tao Rôma. Maneho ny anjara asan' i Kristy amin' izao rehetra izao izy ireo. Misy ireo olona mihevitra fa tsy i Paoly no nanoratra azy ireo fa mpianany izay nanohy ny teôlôjiany.
Epistily ho an' ny Kôlôsiana
Epistily ho an' ny Efesiana
Epistily ho an' i Filemôna
Ireo epistilin' ny Paoly veryHanova
Misy taratasy nosoratan' i Paoly izay tsy ananana intsony nefa voalaza ao amin' ireo epistiliny ao amin' ny Baiboly. Very ny taratasy nosoratany voalohany ho an' ireo Kristiana tao Kôrinto izay voalaza ao amin' ny Epistily voalohany ho an' ny Kôrintiana (1Kor. 5.9). Very koa ny taratasy fahatelo nosoratany ho an' ireo Kristiana tao Kôrinto izay voaresaka ao amin' ny Epistily faharoa ho an' ny Kôrintiana (2Kor. 2.4). Toraka izany koa ny taratasy voalohany nosoratany ho an' ireo Kristiana tany Efesosy (na Efezy) izay ampahatsiahiviny ao amin' ny Epistily ho an' ny Efesiana (Ef. 3.3-4). Toy izany koa ny taratasy nosoratany ho an' ireo Kristiana tany Laôdikea (na Laôdikia) izay resahiny ao amin' ny Epistily ho an' ny Kôlôsiana (Kol. 4.16).
Inty ny lisitr' ireo epistily very ireo:
ny Epistily taloha ho an' ny Kôrintiana (izay tsahivina ao amin' ny 1Kor. 5.9);
ny Epistily fahatelo ho an' ny Kôrintiana atao hoe Epistilin-dranomaso (resahina ao amin' ny 2Kor. 2.4 sy 2Kor. 7.8-9);
ny Epistily taloha ho an' ny Efesiana (ampahatsiahivina ao amin' ny Efes. 3.3-4);
ny Epistily ho an' ny Laodikeana (izay resahina ao amin' ny Kol. 4.16);
↑ "Nanoratra taminareo teo amin'ny epistily aho mba tsy hiharoharoanareo amin'izay mpijangajanga" (1Kor. 5.9)
↑ "Fa tamin'ny haben'ny fahoriana sy ny alahelon'ny foko no nanoratako taminareo tamin'ny ranomaso be, tsy ny hampalahelovana anareo, fa ny mba hahafantaranareo ny fitiavana izay itiavako anareo indrindra." (2Kor. 2.4)
↑ "(...) fa fanambarana no nampahafantarana ahy ny zava-niafina, araka ny voasoratro tamin'ny teny fohifohy teo. Ary araka izany, raha mamaky ianareo, dia ho hainareo fantarina ny fahafantarako ny zava-niafina ny amin'i Kristy." (Ef. 3.3-4).
↑ "Ary rehefa voavaky atỳ aminareo ity epistily ity, dia asaovy hovakina ao amin'ny fiangonan*'ny Laodikiana koa; ary vakionareo kosa ilay avy amin'ny Laodikiana." (Kol. 4.16).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Epistilin%27i_Paoly&oldid=1010388"
Dernière modification le 28 Martsa 2021, à 08:32
Voaova farany tamin'ny 28 Martsa 2021 amin'ny 08:32 ity pejy ity.